Musharaxa Dr. Cusmaan Maxamed Gacal oo si heer sare ah lagu soo dhoweeyay magaalada Muqdisho (sawirro)
Musharaxa Dr. Cusmaan Maxamed Gacal (Cusmaan Joon) oo ka mid ah musharixiinta u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya ayaa si heer sare ah loogu soo dhoweeyay garoonka diyaaradaha Muqdisho, kadib markii uu shalay ka soo degay.
Dr. Cusmaan Joon ayaa waxaa soo dhoweeyay Ururada Bulshada rayidka, Mas'uuliyiin, Xildhibaano iyo qaar ka tirsan Gudoomiyaasha degmooyinka Gobolka Banaadir, waxaana uu gacan qaaday dadkii soo dhoweeyay.
Musharaxa oo ah aqoonyahan ayaa soo noqday Gudoomiyaha Jaaliyada Soomaaliyed ee dalka Talyaaniga, iyadoo uu ku waxbartay Soomaaliya iyo dalka dibadiisa, waxaa uu ka soo shaqeeyay Wasaaradii Warshadaha ee dowladdii Dhexe.
Dr. Cusmaan Joon ayaa u mahadceliyay Mas'uuliyiintii soo dhoweyay iyo qeybaha bulshada rayidka Gobolka Banaadir, waxaana markii la geeyay aqalka uu ka degan yahay magaalada Muqdisho Kooxda Bar-baarta gaashaaman ay ku soo dhoweeyeen Tix gabayo iyo shirib oo uu ka qeyb galay ciyaarta musharaxu.
Waxaa uu ku dhashay Magaalada Kismaayo sanadkii 1954, waa Diktoor xaga Injineeriyada dhismaha ah, waxaa uu ku hadlaa luqadaha, Carabiga, Engilish iyo iyo Talyaaniga, waxaana lagu tilmaamaa nin degan oo aad u tixgeliya dadka talooyinkooda.
Dr. Cusmaan Joon ayaa Munaasabado uu musharaxnimadiisa uu kaga dhawaaqay dalka Talyaaniga waxaa uu ku balan qaaday in hadii uu ku guuleysto madaxtinimada dalka uu wax ka qaban doono arrimaha bani'aadanimada, la dagaalanka musuq maasuqa iyo xiriirka Arrimaha dibada oo aqoon durugsan u leeyahay.
Jaaliyadaha dalka isu taga Imaaraadka Carabta iyo magaalada Nairobi oo uu soo maray ayaa si weyn u taageeray musharaxnimadiisa, iyadoo Jaaliyada Soomaaliyed ee ku dhaqan dalka Talyaaniga ay iyana taageero u muujiyeen musharaxnimadiisa.
Doorashada madaxtinimada Soomaaliya ayaa waxaa ka harsan 9-maalmood, iyadoo 20-ka bisha ay ku egtahay xilliga KMG ah oo la filayo inay qabsoonto doorashada madaxtinimada Soomaaliya oo ay ku tartamayaan musharaxiin fara badan.